Qaybta 3aad: Suldaan Iyo Socdaalkii Dheeraa ee Somaliland
SOMALITALK - SOCDAALKII SULDAAN
Suldaan Iyo Socdaalkii Dheeraa ee Somaliland
Qore: Yaasiin Jaamac Nuux (Suldaan)
Sawirro Hale Halkan ka daawo
19 January 2008, ayaa Hargeysa dalxiis u tegey, waxaan ku degey huteelkii Barwaaqo ee aan hore ugu soo degey. Waxaan socod ku gaalaa bixiyey huteellada waaweyn ee magaallada iyo meelaha kale ee bilicda badan ee aadka kuu soo jiidanaya. Waxaan tegey Huteelka Maan-soor, oo magaca wacan ee quruxda badan ee loo bixiyey (kii maanka soorayey), ka sakow, ku darsaday bilic iyo baaxad weynaan aanan markii hore ka filayn, malaha xayeysiintii Ambaasadoor Huteel loo sameeyey mid ka yar baa loo sameeyey, huteel sidaa u weyn uma haysan, waaw,. Waa huteelka labaad ee Hargeysa ku yaal xagga ballaadhka iyo baxaad weynaanta marka laga yimaaddo Ambaasadoor huteel. Waa five star hotel – bilic, adeeg, ballaadh, shaqaale jajaban iyo adeeg hufan isku darsaday, waxa caddaan iyo madow, meelahaa laptop la fadhiya malayn maysid, ee cabitaanka qabow iyo shaah iyo bun ku cabaya, wuxuu lahaa internet wireless ah oo bilaash ah iyo meelo fadhi loogu talo galay oo kala sarsareeya, xitaa jardiinooyinkiisa waxa dhex joogta ugaadh kala nooc nooc ah. Waa meelaha nafta lagu ilaawo....huteel maansoor... magacaa i dilay...nin dhaqan jecel baan ahayoo, magaciisaa i soo jiitey....
Hargeysa markaad tegtid, waxaad arkaysaa inay samada iyo meelo kale sii tiigsanayso, oo magacyada dukaannada, bakhaarada, hudheellada, booshariyada, iwm waxa loo biyey magacyo ajaanib, oo malaha la moodayo inay ajaanibka gaar u soo jiidanayaan, ama wax cusub oo markiiba la calmado noqonayaan. Magacyada huteellada loola baxay, waxa ka mid ah Ambassador, Imperial, Star, City Center, Scandanevia, Paradise iwm. Waxa lagu iibinayo meelahaas qaarkood baa ah kuwii lagu iibin jirey London iyo Paris. Haddii, carruuri kula socoto, meel aad burger iyo chips uga iibisid waayi maysid, waxaad tegeysaa Snapy bar hotel, iyo m2m, imw.
Inan aannu qaraabo nahay ayaa Hargeysa timi oo dhankaa Burco ka soo gashay, waxay ku soo degtay huteel kuwaa magac ajaanibka ah leh, inantu afsoomaaliga si fiican bay u taqaan, ingiriisidana xooggaa weedho ah ayey jajabsataa. Inantii baa telefoon ii soo dirtay, iina sheegtay inay Hargeysa joogto si aan ugu tago, waxaan weydiiyey meeshay ku soo degtay, dabadeedna waxay burbursatay magacii huteelka, “waxaan ku soo degay hudheelka ‘baradise’ ”- si kale u higgaadi “ ba-ra-di-se”. Bal waatane yaa kuu garta huteelka magacaa leh ee Hargeysa ku yaal, qof kasta oo magaallada ku aqaannay xitaa saxaafadda ku dhehoo waan weydiiyey, laye; garan mayno, malaa waa mid cusub. Kolkii dambe ayaan ku idhi la garan maayo huteelkaagee, kaan degenahay iigu kaalay, waa kuma, waa Huteel Barwaaqo, oo badhtamaha magaallada ku yaal. Way iigu timi, dabadeedna keedii baannu isu raacnay mise waa Huteel Paradise oo Jirde hotel na loo yaqaan. Maantaas baan hoosta ka xariiqay in calmashada magac ajaanibku dhib ku yahay macaamiisha madeniga ah ee aan afqalaadka aqoon..
Huteellada magac soomaaliga leh ee heerka sare ah waxa ka mid ah; Maan-soor, Barwaaqo, Hoodo, Xaraf, Dalxiis, Hadhwanaag iwm. Oo iyaguna ay dhib kala kulmi doonaan ajaanibku ku dhawaaqiddooda, balse yaa mudan in loo sahlo, dadkeenna iyo ajaanibka, adigu ba garo ama Hargeysa weydii!
Waxa mudan in lagu ammaano mudan tayada iyo adeegga wanaagsan ee huteelladu soo kordhiyeen.
Huteelka Barwaaqo anigoo kursiga daaqadda xiga koob shaah ah oo ‘lipton’ ah ku cabaya ayaan jalleecay dad iyo basas hoostayda maraya, waxaan ismoodsiinayaa in daaqad la iiga furay TV-ga anigoo gurigaygii London jooga, si aan u daawado xaaladda dalka, malaha waxa i ilowsiiyey meeshaan joogey (Hargeysa) agabka dhex yaal qolkii aan ka degenayaa huteelka Barwaaqo; adeegga hufan, nadaafadda fiican, marawaxadda qabow, cuntada tayada sarraysa, hurdada marna aanad leddeyn raaxada sariirta darteed, telefoonka, telefiishinka iyo tallaagad qolka ii taal. Waxaan u qaadan waayey wakhtiga kooban ee bulshadeennu isku beddeshay, dalkeennuna ula jaanqaadday dunida kowaad; meelaha qaarna uuba kaga sarreeyo, iyo sida dhaqaalihiisu u hooseeyo oo aannu adeeg bulsho u lahayn.
22 January 2008, ayaan joornaalka ka akhristay taariikhdii SNM oo laga saaray manhajka Somaliland. Arrin weyn oo dadka aan anigu ka mid ka ahaa ku beertay werwer badan, waxa maankayga ku soo dhacday maalintaa beydadkii gabayga ahaa
“Ninka socodka taariikhda raba, inuu suuldaareeyo
Sacab timo leh weeyaan, inaad suurto gelisaane” – Saxansaxo - Gaarriye..
Iguma cusbayn khaladaad badan oo manhajka Somaliland lagu arkay , uguna weynayd sawir-gacmeedkii lagu arkay buugga diinta dugsiga hoose ee fasalka kowaad, kaas oo wasiirradda tacliintu mamnuucday isticmaalkiisa 2006dii. Waxaan u qaatay in dhacdadanina tahay mid la mid ah taas hore oo kale oo wasaaraddu beenin doonto; haseyeeshee ma dhicin. Waxay u muuqatay arrin si badheedh ah loo sameeyey. Wasiirka Tacliinta ayaaba tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey, oo ku tilmaamay in aan dadka reer Somaliland SNM wada ahayn, sidaasi darteedna looga saaray; taasi waxay ii noqon weyday sabab muhiim ah, waxaan isku dayey inaan helo buuggii joornaalka lagu soo qoray iyo waxa ku jira, nasiib darrose may ii suurto gelin arrintaasi; sababtoo ah manhajka Somaliland ee dugsiga hoose/dhexe wuxuu ka kooban yahay 56 buug. Dhowr iyo labaatan buugtaa ka mid ahi gacantayday ayey soo galeen balse kuma jirin kii fasalka sideedaad ee arrimaha bulshada ku saabsanaa. Waxa arrintaa sababay iyo u kuurgal aan ku sameeyey waxaad ka heli doontaan faallada waxbarasha Somaliland oo aan dib ka soo qori doono [insha Allaah]
AKHRI QAYBTA 4aad....